Redmi Rịba ama 7 Pro: Nkọwapụta, ọnụahịa na mmalite | Gam akporosis
Emeela ka Redmi Cheta 7 Pro
Redmi bu ohuru ohuru nke Xiaomi, nke emere dika onwa nke onwe ha na onwa mbu. Kemgbe ahụ, ha hapụrụ anyị ngwaọrụ abụọ, Rịba ama 7 na Redmi gaa. Ọ bụ ezie na ebe ngosi nke mbụ, ekwuputalarị na ụdị ọhụụ ga-abịa n'oge na-adịghị anya, ihe zuru ezu karịa. N'ikpeazụ, e gosiputara ekwentị a. Ọ bụ Redmi Rịba ama 7 Pro.
Redmi Rịba ama 7 Pro bụ ngwaọrụ dị n'etiti, ụdị nke zuru ezu nke Redmi 7 nke ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na Jenụwarị. Ya mere, anyị nwere nkọwa ka mma, yana oke ọnụahịa, dị ka ọ dị na mbụ maka ika ahụ.
N’izu a enwere asịrị na ihe ngosi ya ga-ewere ọnọdụ tupu ọnwa agwụ. E mezuru asịrị ndị ahụ, n'ihi na taa, February 28, ngwaọrụ ọhụrụ a nke akara ndị China mechara bụrụ onye ọrụ. Ekpughewo nkọwa ya zuru ezu ugbu a, yabụ anyị maara ihe ga-atụ anya ya.
1 Nkọwapụta Redmi Rịba ama 7 Pro
Nkọwapụta Redmi Rịba ama 7 Pro
Na ọkwa teknụzụ, Redmi Rịba ama 7 Pro bụ nzọụkwụ dị elu karịa ekwentị mbụ nke ụlọ ọrụ gosipụtara. Middị nke etiti na-eme ka ị nwee mmetụta dị mma. Bet na imewe na notch ihuenyo na ọdịdị nke a dobe mmiri, na mgbakwunye na-enwe a abụọ n'azụ igwefoto. Ndị a bụ nkọwa ya:
Nka na ụzụ nkọwa Redmi Rịba ama 7 Pro
Nlereanya Mara 7 Pro
Ihuenyo LTPS Incell 6.3 sentimita asatọ na FullHD + mkpebi 2.340 x 1.080 pikselụ na 19.5: 9 ruru
Nhazi Qualcomm Snapdragon 675
Igwefoto na-aga n'ihu 48 + 5 MP
Igwe n'ihu 13 MP
Njikọ Bluetooth GPS WiFi 802.11 ac 4G / LTE Dual SIM
Atụmatụ ndị ọzọ N'azụ mkpisiaka ihe mmetụta ihu kpọghee IR Blaster
Ahịa Site na euro 172 ịgbanwe
Igwefoto ahụ ghọrọ otu n'ime ike nke ngwaọrụ a. Dị ka ụdị nke ụlọ ọrụ gara aga, ọ na-abịa na ihe mmetụta 48 MP. Ọ bụ ezie na na nke a Redmi Rịba ama 7 Pro na ụlọ ọrụ ahọrọla ihe mmetụta Sony IMX 586. Yabụ na ọ bụ ọkwa dị elu karịa ihe mmetụta sensọ nke Redmi Rịba ama 7 nwere na Jenụwarị. Ọzọkwa ekele maka ịwụnye na processor, mmelite a na ogo nke ihe mmetụta enweela ike.
Yana ihe mmetụta 48 MP anyị na-achọta ihe mmetụta sensọ nke 5 MP. Otu igwefoto na-echere anyị n'ihu ekwentị, na nke a 13 MP. Abịa na ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ, dịka mmetụta eserese AI kwadoro na mgbakwunye na inwe mmeghe ihu na otu. Ekwentị na-enyekwa anyị ohere iji ihe mkpịsị aka mkpịsị aka, nke na nke a dị na azụ ya.
Banyere processor, Ejiri Snapdragon 675 na Redmi Rịba ama 7 Pro. A nhazi kacha mma karịa ihe mgbakwasị ụkwụ ewepụtara na Jenụwarị. N'ụzọ dị otú a, ọ na-enye ike ka ukwuu na ịrụ ọrụ ka mma. Batrị bụ akụkụ ọzọ nke ụlọ ọrụ ahụ ahapụbeghị ihe ọ bụla. Ebe ọ bụ na ha ahọrọla nnukwu batrị, 4.000 mAh. Tụkwasị na nke a, batrị a na-eji ngwa ngwa ngwa ngwa, dịka ụlọ ọrụ ahụ kwadoro.
Ekwentị enweela ihe ngosi ya na India, ebe etinyere ya ugbua. Ọ bụ ahịa mbụ nke ọ ga-ekwe omume ịzụta ụdị etiti ọhụrụ a. Ọ bụ ezie na ka ọ dị ugbu a, ekwughi ihe ọ bụla banyere mmalite ya na ahịa ọhụrụ. Ọ kwesịrị ịmalite na China n'oge na-adịghị anya, mana anyị enweghị ụbọchị ọ bụla. Anyị amaghị ihe ọ bụla gbasara mwepụta enwere ike na Europe nke ngwaọrụ a, maka ugbu a.
E nwere ụzọ abụọ nke Redmi Note 7 Pro na ire ere na India. Ahịa nke onye ọ bụla n'ime ha bụ:
Ejiri ụdị 4GB / 64GB na Rs 13.999 (1Euro 72 ịgbanwe)
Ihe nlere anya na 6GB / 128GB bu ihe ruru 16.999, nke bu ihe di 210 euro ịgbanwe
Anyị na-atụ anya ịnweta data n'oge na-adịghị anya maka mwepụta nke Redmi Rịba ama 7 Pro na Europe. Kedu ihe ị chere gbasara ụdị etiti ọhụụ a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Emeela ka Redmi Cheta 7 Pro
WhatsApp na-arụ ọrụ na nyocha dị elu na nzacha
Onweghi ike inwe folda enwere na OnePlus: ndia bu ihe kpatara